E7018 sisiseko wawutyabeka umgubo yesinyithi potassium ephantsi uhlobo hydrogen uhlobo electrode. Zombini i-AC kunye neDC zinokusetyenziswa kwaye zinokuba yindawo yonke yokuwelda. Inokufikelela ekusebenzeni kakuhle kwe-welding, ukuqina okuhle kwe-arc, ukuchitheka okuncinci, ukususwa kwe-slag okulula kunye nokubonakala okuhle kwe-weld, ukusebenza kakuhle kokusebenza, kwaye kunokunciphisa i-welding layers.
UKWAKHIWA KWEDIPOSITI (Inqaku loMgangatho):%
Qhagamshela / Rp0.2 MPA
Ubude A /%
IINKQUBO ZOKUSEBENZA NGOKUQHELEKILEYO: (AC, DC +)
Ububanzi kwi (mm)
1. I-electrode kufuneka ivunywe ngama-350-380 ℃ ngeyure e-1 phambi kokuwelda, yome i-electrode xa uyisebenzisa.
2. Umhlwa, i-oyile, amanzi kunye nezinye izinto ezingcolileyo zentsimbi kufuneka zisuswe phambi kwentsimbi.
3. Kufuneka usebenzise i-arc emfutshane, i-swings mayingabi nkulu kakhulu, i-bead welding kufanelekile.
4. Ukuthintela ukuvelisa i-arc porosity, ipleyiti ye-arc kufuneka yamkelwe okanye isebenzise indlela yokubuyisela i-arc welding.
Egqithileyo I-Z408 Pure Nickel Cast Iron Electrode AWS ENiFe-CI
Okulandelayo: Stainless Welding elektroni AWS E309L-16, A062,